Soo dejisan WiFi Manager 3.5.4.2 – Vessoft
Soo dejisan WiFi Manager
WiFi Manager – software ah in la ogaado, in ay ku xirmaan iyo maarayn shabakadaha WiFi ah. Software ka kooban yahay ah diirada u channels garaafyada oo soo bandhigay qiimeynta tayada xidhiidhka iyo gobolka network ee la heli karo. Tababare WiFi kuu ogolaanayaa inaad u astaysto kala duwan ee raadinta, soo bandhigaan shabakadaha maqan iyo waxa si toos ah u baddashaan network la signal ugu fiican. Sidoo kale software leeyahay widget ah in bandhigayaa warbixin ka faahfaahsan oo ku saabsan gobolka network si toos ah shaashada ugu weyn ee qalabka. Tababare WiFi ayaa interface fudud iyo dareen la mawduucyada kala duwan ee decoration.
Baaritaanka iyo xidhiidh la leh shabakadaha WiFi ah
Bandhigay warbixinta faahfaahsan oo ku saabsan shabakadaha la heli karo
Tiro badan oo ah qalab si astaysto
WiFi Manager Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Adobe Reader 15.3.1